Conscient de la valeur de l’insurrection du 29 mars 1947, le Président Directeur Général de la société Vision Madagascar (VIMA), Zouzar BOUKA a été présent à la cérémonie de commémoration du 29 mars 1947 à Moramanga. Interview : Zouzar BOUKA « C’est une fierté et honneur d’être ici pour la commémoration 29 mars 1947. C’est important(…)
Hiara-hiasa amin’ny taranaka Ambohidrabiby ny masoivohon’ny Indonezia amin’ny fanarenana ny rova ao Ambohidrabiby. Manomboka amin’ity taona 2018 ity ny fanarenana ka ny Lapa Fenohasina izay nitoeran’ny mpanjaka Rabiby no hanombohana ny asa. Aorian’izay ny Lapa Manjakazafy izay nitoeran’ny mpanjaka Ralambo.
ACTUALITE/ CULTURE/ Histoire/ SOCIAL
Tous les salariés de ViMa Woods sont conviés à la commémoration du 70ème anniversaire du 29 Mars 1947 de Moramanga.
Tsy avela hiraraka an-tany fotsiny ny ra mandriakan’ireo mahery fo tamin’ny tabataba 1947. Mila tohizana ny tolona nataon’izy ireo izay niady ho an’ny tanindrazana izay nanjakazakan’ny Frantsay. Feno fito-polo taona androany ny daty manan-tantara 29 martsa 1947.
ACTUALITE/ CULTURE/ Economie/ Histoire/ SOCIAL
MALASO MADAGASCAR II: Vokatra faharoa an’i “Madagascar Island Pictures”.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire mar 1, 2017
Anisany niaina tamin’ny fiarahamonina nanjakan’ny asan-dahalo i Réné Fulgence, Talen’ny famokarana ao amin’ny MIP na Madagascar Island Pictures. Izany indrindra no antony namokarana ny horonantsary Malaso I. Mitantara ny zava-misy iainan’ny olona, ny fombafomba ataon’ireo dahalo mialoha sy mandritra ny fanafihana izy ity. Interview Extrait
ROVAN’ANTONGONA: “Olona te haka na te hitazona fahefana no nahavanona ny loza”.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire oct 25, 2016
Midika ho fananana fahefana sy mahery ary afaka mibaiko ny fitazomana vangim-boay sy lefom-pohy. Tsy fitia te hamaky ny rova an’Antongona fotsiny noho izany ny fangalarana ireo vakoka ireo.